Konke okufuneka ukwazi malunga nomrhumo wokuzimela | Ezezimali
Usomashishini osebenza eofisini
La Isabelo sabazimeleyo yintloko ebuhlungu kwabaninzi: Ukuyiqonda, ukuyamkela, ukuyihlawulela nokuyifumanisa, kwaye zininzi izinto ezahlukeneyo, iimeko, inkxaso-mali kunye neentsomi zasezidolophini ngayo.
Siza kuzama ukukuxelela yonke into malunga Umrhumo wokuzimela kunye nomrhumo odumileyo kunye nomtsalane Iiyuro ezingamashumi amahlanu.
Xa uqala, okanye nayiphi na into, ukuzisebenzela ngokwakho, kuya kufuneka 'uzimele' ukuze ukwazi ukusebenza ngaphakathi komthetho waseSpain, ufumane izibonelelo ezithile kunye noxanduva kunye nalo.
Eyona iphambili yile ukubhaliswa kwiNkqubo ekhethekileyo yabasebenzi abaziqeshileyo (RETA), ebandakanya ukuhlawulwa komrhumo wenyanga esiwaziyo njenge 'ntlawulo yokuzenzela' eyahluka minyaka le.
Le ntlawulo ihlawulwa ukusuka kusuku lokuqala lomsebenzi weshishini lakho okanye usebenza njenge-freelancer. Unokusebenza ngokufana Ukuzimela geqe okanye ukuzimela. Apha siza kuthetha ngabazimeleyo.
Umntu ozisebenzelayo kufuneka enze intlawulo yomrhumo kuNondyebo Jikelele woKhuseleko lwezeNtlalontle, ebonisa inombolo yeakhawunti, kunye ne-IBAN ibandakanyiwe kolu nondyebo, ekhumbula ukuba le mali okanye umrhumo wenyanga ayisiyiyo kuphela umntu ozisebenzelayo kufuneka ithobele.
La Isabelo esizimeleyo Ayisiyonto ngaphezulu kwepesenti ebalwe ngokwesiseko somrhumo, okanye masithi, umvuzo, oqikelelwa ngumqeshwa ukuba abe nenyanga nganye, ubuncinci kunye nesiseko esona siphezulu senziwe nguRhulumente waseSpain.
Esi siseko se ixabiso liya kuba sisiseko (Uxolo ngokungabikho komsebenzi) ukubala izibonelelo zokungaqeshwa, ikhefu ngenxa yeengozi okanye ukugula, kwaye, ngaphezu kwako konke, ukubala umhlalaphantsi, njengoko siza kubona kamva.
Isiseko esisezantsi sogcino, ngo-2016, yi- € 893,10 ngenyanga, efikelela kumrhumo wenyanga we- € 267,04, kwaye ubuninzi be- $ 3.642 ngenyanga.
Kuya kufuneka uyazi ukuba iipesenti ezingama-85 zerejista ezizimeleyo phantsi kwesiseko esisezantsi, nokuba ingeniso yabo ayonelanga, ngenxa yokungaqiniseki okanye ngenxa yokungahoyi, ngokuzithandela okanye hayi, iziphumo zokukhetha isiseko esiphakathi kunye neside ikamva.
1 Iindidi zeentlawulo ezizimeleyo
2 Ubalwa njani umrhumo wokuzimela
3 Ngaba kuya kufuneka uhlawule umrhumo wakho ozimeleyo ukuba awufikeleli kwi-SMI?
4 Thatha ithuba lokucaba kwixabiso lokuzimela
Iindidi zeentlawulo ezizimeleyo
Phambi kokuba uqhubeke, kuya kufuneka ucace ukuba akukho sithuba sinye sabasebenza ngokukhululekileyo, kuba kuxhomekeke kubudala, icandelo lomsebenzi, ukukhanya kwenyanga, njl. Urhulumente umisela izabelo ezahlukeneyo:
Ukuzimela kunye nemisebenzi emininzi
Kwiinyanga ezili-18 zokuqala zomsebenzi, umrhumo uyi- $ 133,52 ngenyanga, emva koko yi-200,28 ngenyanga.
Uyaziqesha kunye nabasebenzi abali-10
Ukuba inkampani yakho inabasebenzi abali-10 kwinkampani yakho, umrhumo uyi- $ 1,063.33 ngenyanga. Ukuba wenza igalelo kuphela kwizinto ezingxamisekileyo, umrhumo wenyanga yi- $ 319,14.
Abantu abazimeleyo abangaphantsi kweminyaka engama-47 ubudala
Kukho iimeko ezininzi zabasebenza ngokukhululekileyo abaneminyaka engama-47 ubudala okanye abancinci, ezi zilandelayo:
Ukuba igalelo lakho ngo-2015 lalilingana okanye lingaphezulu kwe-1.945,80, okanye ukuba ubhalisele urhulumente ozisebenzelayo, unokukhetha isixa phakathi kwesiseko esisezantsi kunye nesona siphezulu sivunyelwe nguRhulumente kulo nyaka ukhoyo.
Ukuba igalelo lakho beliyi-1.945,80 okanye ngaphantsi, awunakukhetha isiseko esingaphezulu kwe- $ 1.964,70 ngenyanga, ngaphandle kokuba uyibhengeze phambi kukaJuni 30 walo nyaka, okanye uliqabane lomtshato elisaphilayo (ngulo uthatha ishishini leqabane lakhe emva owokugqibela uyadlula)
Uyazisebenza uneminyaka engama-48 okanye ngaphezulu
Abantu abazimeleyo abaneminyaka engama-48 nangaphezulu kufuneka bakhethe ubuncinci be- € 963,30 kwaye ubuninzi be- € 1.964,70 ngenyanga njengesiseko senkxaso, ke umrhumo wakho wokuzimela rhoqo ngenyanga uya kuba ubuncinci i-288,03 euro
Ukuba uneminyaka engama-50 ubudala okanye ngaphezulu, kufuneka ubeke isiseko sakho senkxaso yemihla ngemihla ngokwemisebenzi yakho kwiminyaka yamuva.
Ngokubanzi, ezi ziindidi ezahlukeneyo zoorhulumente abazisebenzelayo ezikhoyo eSpain, nangona zininzi ngokwento nganye eyenziwayo, ubudala kunye neprofayili yomntu obhalisa njengomntu oziqeshileyo, ke kufuneka ulumke kwaye uhambe kwingcali ukukukhokela malunga noku.
Ubalwa njani umrhumo wokuzimela
Sele uyayazi eyona nto ibalulekileyo: kukho imirhumo eyahlukeneyo kwaye kufuneka uqale ukuhlawula ukusukela kusuku lokuqala lomsebenzi kwishishini lakho, kwaye, njengoko sele sibonile kwinqaku elidlulileyo, kukho imirhumo eyahlukeneyo, kuxhomekeke kubungcali , iminyaka kunye nezinye izinto Isiseko sokucaphula ekufuneka usikhethileNokuba uyavuma okanye awuvumelani nesixa, uyazi, uRhulumente uyathumela, umzekelo, lo 2016 unyuswe nge-1% xa kuthelekiswa no-2015, kwaye ulwando olungaphezulu kulindeleke ngo-2017.
Ukongeza kuyo yonke le nto, kuya kufuneka wazi ukuba kukwakho nezigqubuthelo, njengayo nayiphi na ipolisi yeinshurensi: kuxhomekeke kukugubungela okukhethiweyo, uya kuhlawula ngaphezulu okanye ngaphantsi.
Nazo ezi zigqumathelo onokuzikhethela kwi-p yakhoukhuseleko kulawulo oluzimeleyo:
Izinto ezingxamisekileyo eziqhelekileyo: Zimele i-29,90%, kwaye zigubungela iimeko eziqhelekileyo ezinokubakho kunye nokuncancisa kunye nokukhulelwa.
Ukungxamiseka ngenxa yokupheliswa kwemisebenzi: Imele ama-31,5% enkxaso yemihla ngemihla oyisekileyo.
Ukungxamiseka kweengozi emsebenzini: Imele i-29,3% kunye nepesenti ngokwesebe lomsebenzi ngokwe-CNAE.
Ukungxamiseka kweengozi emsebenzini kunye nokupheliswa komsebenzi: Yi-31,5% kunye nepesenti yenqanaba lomsebenzi, ngokwe-CNAE.
Ukuba ukhethe isiseko esisezantsi senyanga sokufaka igalelo, iya kuba yile Izabelo ngokwemeko nganye ekhankanyiweyo:
Izinto eziqhelekileyo ezenzeka rhoqo: € 893,10 x 29,90% = € 267,04 ngenyanga
Ukupheliswa komsebenzi: € 893,10 x 31,6% = € 282,22 ngenyanga
Ukuqinisekiswa ngumsebenzi: € 893.10 x 29,3% +% CNAE = € 268,72 - € 325,53
Ngengozi yomsebenzi kunye nokupheliswa ngenxa yomsebenzi: € 893,10 x 31,5% +% CNAE rate = € 289,36 - € 345,18
Ngaba kuya kufuneka uhlawule umrhumo wakho ozimeleyo ukuba awufikeleli kwi-SMI?
Ngoku sifuna ukukubonisa ingxaki eSpain yamva nje: nokuba ungabhalisi njengabantu abazisebenzelayo xa ingeniso incinci.
Masicinge ukuba uvelisa umvuzo wenyanga wama-300 euros kwimisebenzi yakho, nokuba uyilo lomzobi, umakhi wezitena, uyilo okanye utitshala. Umrhumo wokuzimela uza kukushiya ngokuqinisekileyo, Ungayichazanga enye irhafu ekufuneka umntu oziqeshileyo ajongane nayo.
Kwaye le ngxaki inabantu abaninzi kunokuba ucinga, kwaye oko kubakhokelela ekubeni bangabhaliseli urhulumente ozisebenzelayo, kwaye ke bayinxalenye yoqoqosho lwelizwe oluphantsi komhlaba, babangela umngxunya kuhlahlo-lwabiwo mali ngokubanzi unyaka nonyaka, exabiswa kwiibhiliyoni zeerandi.
Yintoni ingxaki? Umsantsa osemthethweni kulo mbandela: Umthetho awutsho ukuba wenzeni ngabantu abafumana umvuzo ongaphantsi Owona Mvuzo uphantsi woNcedo.
Ukuba le yimeko yakho, kwaye uthetha ne-Ofisi yoMphathiswa Wezimali, baya kukuxelela ukuba ubhalise kwi-Ofisi kaNondyebo, ukuze umvuzo wakho ulawulwe liSebe, ukuze ungaphathi imali 'emnyama'. Baza kukuxelela ukuba ubhalise ngefom 036 okanye 037, ukuze ukwazi ukukhupha ii-invoice kubaxumi bakho.
Ukuba uya Ukhuseleko lasekuhlaleni, Baza kukuxelela ukuba kufuneka ubhalise njengomntu oziqeshileyo ewe okanye ewe, nokuba urhola i-euro ezilishumi okanye amawaka amabini ngenyanga. Kuya kufuneka uthobele, yiyo loo nto baya kukuxelela yona.
Uninzi lwabasebenzi abaziqeshileyo ke ngoko bakhetha ukubhalisa kwi-ofisi yerhafu, ukuze babhengeze ngokusemthethweni umvuzo wabo, ngaphandle kokubhalisa kukhuseleko lwentlalo, benomngcipheko wokuba, xa unqumla idatha, lo mva, onobunkunkqele nobungqongqo, uyakuthumela isohlwayo xa ubanga imirhumo ongayihlawulanga, kunye ne-20% eyongezelelweyo kuloo mali.
Nangona bekukho ubugqwetha kula matyala ukusukela ngo-2007, oko kukuthi, uninzi lwabasebenzi abazisebenzelayo baye basifumana esi sohlwayo, kwaye iNkundla ePhakamileyo ibasusile, beqonda ukuba, ukuba isiseko esincinci senkxaso kunye / okanye owona mvuzo mncinci wobungcali awufikelelwanga, kukho akukho sinyanzelo sokuhlawula umrhumo ozisebenzelayo.
Nangona ungafanelekanga, okanye wena okanye nabani na, uthathe umngcipheko, kungcono ukuba ufune iingcebiso kwaye uphephe isohlwayo esinokubakho, kwaye nangona usenokukwazi ukubhena, onke amaphepha kunye nenkqubo yenkqubo ayimnandi.
Thatha ithuba lokucaba kwixabiso lokuzimela
Nokuba unayo okanye ayiyongxaki yakho, kuya kufuneka uyazi ukuba uRhulumente waseSpain uvumile ukusukela nge2013 ireyithi ethe tyaba kwimirhumo yokuzisebenzela, eyinciphisa yaya kuthi ga kwi-50 ngenyanga ngenyanga endaweni yemirhumo epheleleyo esiyibonileyo. Ekuqaleni yayiyeyabo baphantsi kweminyaka engama-30 kuphela, kodwa ngo-2015 bayishiyela wonke umntu.
Ibandakanya ukunciphisa isabelo kubuncinci kwaye ngokuthe ngcembe ukufikelela kwintlawulo epheleleyo yesabelo, ukuze kuliwe uqoqosho lwangaphantsi komhlaba kunye nokukhuthaza ukuzisebenzela.
Le yindlela onokuthi uyihlawule ngayo iifizi zokuzimela kunye nereyithi ethe tyaba:
€ 50 ngenyanga kwiinyanga ezintandathu zokuqala
€ 133 ngenyanga ukusuka kwinyanga yesixhenxe ukuya kwinyanga yeshumi elinesibini
€ 187 ngenyanga ukusuka kwinyanga ye-13 ukuya kwi-18
Iimfuno zokufikelela kweli nqanaba licabaweyo:
Ndingabhaliswanga kulawulo oluzimeleyo kule minyaka mihlanu idlulileyo
Ukungabi ngumlawuli wenkampani yorhwebo
Ukungafumani nayiphi na ibhonasi yokhuseleko kwezentlalo, ngekhe, ngaphandle kwamaxesha
Ukungabi ngumdibanisi ozimeleyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » Abashishini » Isabelo esizimeleyo
Gcina imali yakho oyigcinileyo kwimarike yemasheya, kodwa ngolwazi
Ungayigcina njani imali kwiikhomishini kwintengiso yemasheya?